Edere site Tranquillus | Jan 1, 2019 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Dee ka agu ya
Otu onye ọrụ ibe zitere gị email maka nzukọ ị nwere n'ime otu elekere. Ekwesịrị ka email ahụ nwere ozi bụ isi nke ịchọrọ iweta, dịka akụkụ nke ọrụ dị mkpa.
Mana enwere nsogbu: edere email ahụ nke ọma na ị nweghị ike ịchọta data ịchọrọ. Enwere mperi mkpope na ahịrịokwu ezughị oke. Paragraf ndị ahụ dị ogologo na mgbagwoju anya nke na ọ na-ewe gị ugboro atọ ka ọ na-ewe iji chọta ozi ịchọrọ. N’ihi ya, ị dịchaghị njikere maka nzukọ ahụ, ọ naghịkwa aga nke ọma dị ka i chere.
Ò nwetụla ụdị ọnọdụ a ihu? N'ime ụwa juputara na ozi, ọ dị mkpa iji kparịta ụka nke ọma, nkenke na nke ọma. Ndị mmadụ enweghị oge ịgụ ozi-e ogologo akwụkwọ, ha enweghịkwa ndidi iji kọwapụta ozi-e ndị arụrụghị nke ọma yana ebe ozi bara uru na-agbasasị ebe niile.
Gụnyere gị ede ihe dị mma, ka mma mmetụta ị ga-enwe na ndị gbara gị gburugburu, gụnyere onye isi gị, ndị ọrụ ibe na ndị ahịa. Ị maghị ebe ezigbo echiche ndị a ga-ewe gị.
N'isiokwu a, anyị ga-ahụ otu ị ga - esi meziwanye nkà ịde ederede ma zere imehie ihe.
Ndị na-ege ntị na usoro
Nzọụkwụ mbụ iji dee nke ọma bụ ịhọrọ usoro kwesịrị ekwesị. Ịkwesịrị izipu ozi-e na-edoghị anya? Dee akụkọ zuru ezu? Ma ọ bụ dee akwụkwọ ozi?
Usoro ahụ, yana ndị na-ege gị ntị, ga-akọwapụta "olu ederede," ya bụ ka ụda olu kwesịrị isi bụrụ nke ziri ezi ma ọ bụ dị jụụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-edegara onye ahịa nwere ike ide ozi-e, ọ ga-enwe otu ụda dị ka ozi email nye enyi gị?
O doro anya na ọ bụghị.
Malite site n'ịchọpụta onye ga-agụ ozi gị. Ọ bụ maka ndị isi ụlọ ọrụ, ndị otu niile, ma ọ bụ obere ìgwè na-arụ ọrụ na otu faịlụ? N'ihe niile ị na-ede, ndị na-agụ gị, ma ọ bụ ndị nnata gị, kwesịrị ịkọwa ụda gị yana akụkụ nke ọdịnaya.
GỤỌ Esi dee ozi ịntanetị ọkachamara
Ngwakọta na ịke
Ozugbo ị matara ihe ị na-ede na onye ị na-ede, ị ghaghị ịmalite ide.
Ihuenyo kọmputa nke oghere na-acha ọcha na-atụkarị egwu. Ọ dị mfe ịrapara n'ihi na ị maghị ka esi amalite. Gbalịa ndụmọdụ ndị a maka ịmepụta na ịhazi akwụkwọ gị:
Malite na ndị na-ege gị ntị: Cheta na ndị na-agụ gị nwere ike ịma ihe ọ bụla gbasara ihe ị na-agwa ha. Gịnị ka ha kwesịrị ibu ụzọ mara?
Mepụta atụmatụ: Nke a bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ ogologo, dị ka akụkọ, ngosi ma ọ bụ okwu. Ihe ndepụta na-enyere gị aka ịmata usoro ị ga-agbaso n'usoro wee gbawaa ọrụ ahụ ka ọ bụrụ ozi enwere ike ijikwa.
Gbalịa inwe mmetụta ọmịiko: Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ede ozi email maka ndị ahịa nwere ike ịre ahịa, gịnị kpatara ha ga-eji na-eche banyere ngwaahịa gị ma ọ bụ ahịa gị? Olee uru ọ baara ha? Cheta mkpa ndị na-ege gị ntị mgbe niile.
Jiri triangle okwu ahụ: Ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ka mmadụ mee ihe, jide n’aka na ị kọwapụta ihe mere ndị mmadụ ji kwesị ige gị ntị, ghọta ihe ị na-ekwu n’ụzọ ga-eme ka ndị na-ege gị ntị nwee mmasị na ya, ma kwuo ya n’ụzọ ezi uche dị na ya.
Chọpụta isi okwu gị: Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịkọwa isi isiokwu nke ozi gị, mee ka à ga-asị na i nwere 15 sekọnd iji kọwaa ọnọdụ gị. Kedu ihe i kwuru ? Nke a nwere ike ịbụ isi okwu gị.
Jiri asụsụ di ala: Ọ gwụla ma ị na-ede akwụkwọ sayensị, ọ kacha mma iji asụsụ dị mfe ma kwụ ọtọ. Ejila ogologo okwu na-amasị ndị mmadụ.
Akwụkwọ gị kwesịrị ịdị ka onye ọrụ enyi dịka o kwere mee. Jiri utu aha, ndepụta okwu, bullets na nọmba dị ka o kwere mee iji kewaa ederede.
A sị ka e kwuwe, gịnị nwere ike ịdị mfe ịgụ: peeji nke jupụtara na paragraf ndị dị ogologo ma ọ bụ ibe e kewara ná mkpirikpi paragraf ndị nwere isiokwu nkebi na akara mgbo? A ga-agụkarị akwụkwọ nke dị mfe nyocha karịa akwụkwọ nwere paragraf dị ogologo.
GỤỌ Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa site na email
Isiokwu kwesịrị ịdọrọ uche onye na-agụ ya. Iji ajụjụ na-abụkarị ihe dị mma, karịsịa na mgbasa ozi mgbasa ozi, n'ihi na ajụjụ na-enyere aka mee ka onye na-agụ ya nwee mmasị na mmasị.
Na e-mail na atụmatụ, jiri utu aha na mkpirisi, dịka ndị dị n'isiokwu a.
Mgbakwunye ndị na-ese ihe bụkwa ụzọ dị mma iji kewaa ihe ederede gị. Ngwa ihe a na-ahụ anya ọ bụghị nanị na onye na-agụ ya ga-elekwasị anya na ọdịnaya ahụ, kamakwa iji kọwaa ozi dị mkpa karịa ngwa ngwa.
Eleghị anya ị maara na mmejọ na email gị ga-eme ka ọrụ gị yie ihe na-adịghị mma. Ọ dị mkpa iji zere nnukwu mmejọ site n'inweta onwe gị onye na-enyocha spepe na idegharị mkpụrụ okwu gị dị ka o kwere mee.
Lee ụfọdụ ihe atụ nke okwu ndị a na-ejikarị eme:
Ana m eziga / zipu / zipụ gị
Ngwaa "iziga" ịbụ ngwaa nke ìgwè mbụ, otu ga-edetakarị na onye mbụ nke "M zipụ" na "e". "Shipment" na-enweghị "e" bụ aha ("mbupu") ma nwere ike bụrụ otu: "mbupu".
M sonyere gị / m sonyere gị
Otu ga-ede mgbe nile "M sonyere gị" na "s". "Mkpakọrịta" na "t" bụ njikọ nke onye nke atọ "ọ na-esonye".
Oge njedebe / oge ngwụcha
Ọbụna ma ọ bụrụ na "afụ ụfụ" dị na aha nwanyị, ekwela ka ọnwụnwa dakwasị gị ma dee "bumper" na-enweghị "e" mgbe niile.
Nkwanye / nkwanye
Ọ bụrụ na Bekee anyị dee "nkwanye" na "e", na French anyị na-ede "ndụmọdụ" mgbe niile na "a".
Enwere / e nwere / dị n'ebe ahụ
Anyị na-agbakwunye “t” euphonic na usoro ịjụ ajụjụ iji kwado mkpọpụta ma gbochie ụdaume abụọ n’usoro. Ya mere, anyi ga ede “n’ebe ahu”.
Na usoro nke / na usoro nke
Onye anaghị ede "na" enweghị "s". E nwere n'ezie "ọtụtụ okwu" ọtụtụ ugboro n'iji okwu a.
GỤỌ Ọ ka mma izipu ozi-e ma ọ bụ karịa akwụkwọ ozi?
Nke / n'etiti
Kpachara anya ka okwu a ghara iduhie gi "ma o bu" nke gedebe na "s". Onye anaghị ede "n'etiti" na "s". Ọ bụ nkwupụta na ọ gaghị ekwe omume.
Dị ka ekwetara / dị ka ekwetara
Ọbụna edebere na aha nwanyị, "dị ka a kwadoro" enweghi ike imeri ma ọ dịghị ewe "e".
Nlekọta / ọrụ
Ekwula aha na ngwaa. Aha "nyocha" na-enweghị "t" na-akọwa mgbanwe ma ọ bụ "nyocha ọrụ". A na-eji okwu ahụ a na-ejikọta ya na onye nke atọ nke "na-ekwusi ike" mgbe ọ na-abịa ime ihe nke ịnọgide na-enwe ihe.
Ụfọdụ n'ime ndị na-agụ gị agaghị ezu oke na ntụgharị okwu na asụsụ. Ha nwere ike ghara ịchọpụta ma ọ bụrụ na ịmee ihe ndị a. Ma ejila nke a dị ka ihe ngọpụ: ọ ga-abụkarị mmadụ, karịsịa ndị isi ụlọ, ndị ga-achọpụta!
N'ihi nke a, ihe ọ bụla ị na-ede kwesịrị ịbụ àgwà a na-anabata maka ndị niile na-agụ ya.
Onye iro nke nzigharị nke ọma bụ ọsọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ọsọ na ozi-e ha, mana otu ahụ ka ị na-atụfu mmejọ. Soro ntuziaka ndị a iji nyochaa ihe ị dere:
Lelee isi ihe na nkụ: Ndị mmadụ na-elegharakarị ha anya ka ha lekwasị anya naanị na ederede. Naanị n'ihi na nkụnye eji isi mee bụ nnukwu na obi ike apụtaghị na ha enweghị njehie!
Gụọ ozi-e: Nke a na-eme ka ị jiri nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu, nke pụtara na ị ga-achọpụta njehie.
Jiri mkpịsị aka gị soro ederede ka ị na-agụ: Ọ bụ ihe ọzọ na-enyere gị aka ịkwụsịlata.
Malite na njedebe nke ederede gị: Gụgharịa amaokwu site na njedebe ruo na mmalite, ọ na-enyere gị aka ilekwasị anya na njehie ma ọ bụghị ọdịnaya.
Mee ka nkà izi ede gị dịkwuo mma Mee 10th, 2020Tranquillus
gara agaKedu otu esi dee ozi ịntanetị doro anya na ọkachamara?
-esonụMgbe ihu na ihu dị mma karịa email